Yunaayitid Kiingidam - BBC News Afaan Oromoo
Ifa uumamaa malee qaamni keenya yeroo lakkaa'uu irratti suuta waan jedhuuf marsaa yeroo sa'a 24 irratti daqiiqaa 30 dabalaa adeema.
Saantimnii warra Roomaa durii ijaarsa daandii irratti argame
Saantimni jaarraa 3ffaa kuni suuraan mootii Roomaa ji'a sadiif bulche irratti anceefameera
Dhaabbanni Fayyaa Addunyaa (WHO) qajeelfama kan jalqabaa akka itti namoonni dhukkuba waa dagachuu ykn 'dimentia' ofirraa ittisan baaseera.
Manneen dhugaatii alkoolii hin gurgurre
Manni dhugaatii amma isinitti himuuf jennu kuni magaalaa Niw Yoork bakka Biruukiliin daandii Giriinpoyiintitti argama. Kenyaan manichaa magariisaafi bifa samii qaba.
Dhibee onneetiin duutii maaliif dabalaa dhufe?
Hammantan du'aatii sababii dhukkuba onneefi sirna dhiigaa walqabate namoota umuriin isaanii waggaa 75 gadi ta'e irratti waggaa 50 booda akka addaatti dabaluu isaa qorannoon mul'ise.
Hanga sekondii xumura tapha har'aatti falmiin waancaa Piriimerliigii kileboota lamaan gidduuttii gaggeeffama
Liiverpuul seenaa waggoota dheeraa deebisuuf, Maanchister Siitiin shaampiyoonummaa isaa tursiisuuf falmiin itti fufe har'a xumura argata.
Ajax 2-3 Totenaam: Lukaas Mooraaf siidaan dhaabbachuu qaba -Kiristiyaan Eriksen
Lukaas mooraan galchiiwwan sadii Tootenaamiif lakkoofsisuun waancaa Shaampiyoonsi Liigii xumuraaf dhaqqabsiise.
9 Caamsaa 2019
Warri Biriitish duriirraa 'quunnamtii saalaatiin' dadhabaa dhufuu himame
Qunnamtii saalaatiin eenyyuu akka caalaa gammaduu fi jiddu galaan ammantaan quunnamtii saalaa raawwatamu qabaatuu qorannoon addaa baheera.
Daa'ima warra mootii: Meghaan ilma da'uu abbaan manaa ishee, Hariin beeksise
Ilmi sanyii warra mootii UK Hariin inniifi haati warraa isaa meghaan mucaa ilmaa argachuu isaaniitti "guddaa gammaduu" dubbate.
Piriimer Liigiin baranaa hedduu deggertoota qalbii rarraasaa jira
Piriimer Liigiin Ingiliiz bara kanaa kan tokkoffaadhaaf akkasumas tokkoo hanga afurii warra jiran keessa galuudhaaf morkiin taasifamu hedduu deggertoota qalbii rarraaseera.
Namichi hidhaan itti murtoofnaan asiidii ofirratti dhangalaasae
Namtichi hospitaala galee haala yaaddessaa keessa jira
Atileetiin lammii Keeniyaa Eliud Kipchogee maaraatoonii Landanitti gaggeeffamerratti tokkoffaa yoo bahu, atileetonni Itoophiyaa ammoo 2ffaa-4ffaa bahuun xumuraniiru. Moo Faaraah magaalaa guddoo biyya isaarratti 5ffaa baheera.
29 Ebla 2019
Atileetota Itoophiyaa: Maaraatoonii Landan olaantummaan xumurra
Dorgommii Maaraatoonii Landan Dilbata dhufu dorgomamu irratti Atleetonni Itoophiyaa hirmaatan olaantummaan xumuruuf qophii ta'uu dubatan.
26 Ebla 2019
Nasa'n Kirkirri lafaa Maarsii irra jira jedhe
Lafaa fi Ji'a irraa kan hafe kirkirri lafaa yeroo jalqabaaf Maarsii irratti argamuu isaati.
Dubartiin UAE waggoota 27f of wallaaltee turte of barte
Muniiraa Abdullaa, dubartii Yunaayitid Arab Imiratis bara 1991 irraa kaastee balaa konkolaataa ishee mudaterraa kan ka'een of wallaaltee turteetti.
Ingilaanditti faalamni ifaa foyya'aa hin jiru jedha qorannoon
Nama 50 keessaa tokkotu urjii uumamaa arguu danda'a jedhan qorannoo Ingilaanditti taasifame
Haleellaa boombii wal duraa dubaan manneen amantaafi hoteelota irratti raawwateen biyyattiin rifaatuu guddaa keessa jirti.
Qorichi 'Statins' jdhamu cooma hir'isuuf oolu 'nama lama keessa tokkoof hin hojjattu' jedhame
Qorannoo haaraa fayyidaa qorichoonni kolostiroolii hir'isaan qaban kan laamiileen Biriteen miliyoonaan lakka'aaman fayyadaman irratti gaafii qabu.
Karaawwan torba interneetiidhaan itti jaalallee horachuun danda'amu
Karaawwan toora interneetaatiin jaalallee barbaaddachuun namoota umurii kamuu keessa jiraniin addunyaatti baramaa dhufeera. Hangam isaaniitu milkaa'eera? Karaawwan toora interneetaa jallallee kan nuuf taatu argachuudhaaf maal gochuu qabnaa?
Juliyaan Asaanjee: Hundeessaan Wikileaks Landan keessatti to'annaa jala ooler
Embaasii Ekuwaadoor Landan jiru keessaa bara 2012 irraa eegalee kolu-galtummaan kan ture hundeessaan Wikileaks ar'a to'annaa jala ooleera. Himannaa yakka saal-qunnamtiin walqabatee irratti banameen walqabatee akka Siwiidiinitti dabarfamee hin kennamneef kan koluu-galtummaa keessa ture.